कसरी बनाउने विवाहित जीवनलाई रोमाञ्चक ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी बनाउने विवाहित जीवनलाई रोमाञ्चक ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २०, २०७८ 0
धारण हो तर यदि यी स–साना समस्या समय हुँदा नै हल गरिएन भने यसले विकराल रुप लिन बेर लगाउँदैन।
धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो नीजि जीवनबारे खुलेर कुरा गर्नबाट बच्छन्। यी समस्यालाई टाढा राख्नका लागि रिलेशनशिप एक्सपर्टका केही सल्लाह मानिसहरुलाई काम लाग्न सक्छ। आउनुहोस् यसबारे जानकारी लिऔं।
पार्टनरबाट आफ्नो लागि मात्रै आशा नराख्नुहोस्, जति तपाईंले आफूलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि त्यति नै आफ्नो पार्टनरलाई पनि दिनुहोस्। तपाईंहरुको विचार एकै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने छैन तर अलग–अलग पिचारको सम्मान गर्न पनि आवश्यक छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार